को हुन् यी स्टार किड ? जसकाे बलिउडमा छ चर्चा नै चर्चा – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/को हुन् यी स्टार किड ? जसकाे बलिउडमा छ चर्चा नै चर्चा
बलिउडमा प्रबेश नगरी नाम कमाउन मुस्किल छ, तर याे मुस्किललाइ एक युवतीले यसलाइ सम्भव गर्दिएकि छिन् । यी युवतीले निकै चर्चा कमाएकि छिन् । उनलाइ ‘वाटर बेवी’ भन्नेेर चिनिन समेत थालिएको छ । उनलाइ वाटर बेवि भन्नुकाे अर्थ के हाे ? कारण यस्ताे छ, धेरैजसो समय उनी स्विमिङ पुल वा समुन्द्री किनारमा बिताइरहेका देखिन्छन् ।
उनी अभिनेता चंकी पान्डेकी भतिजी हुन् । चंकी पान्डे, जसले दर्जनौ फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय उनी हाउसफुल शृंखलामा निरन्तर देखिदैछन् ।
बलिउड डेब्यु गरेर चर्चामा छाइरहँदा उनकी काकाकी छोरी अलाना भने बोल्ड तस्वीरको कारण दुनियाको ध्यान खिच्दैछिन् । अलाना अन्य स्टार किड्स जस्तै धेरै लाइमलाइटमा त छैनन्, तर शोसल मिडियामा उनले एउटा जमातलाई कब्जा गरेकी छिन् । अलानाको इन्स्टाग्राममा ४९३ हजार फलोअर्स छन् । साथै उनका अधिकांश फोटो विकिनीमा हुन्छ । उनले कुनै फिल्म खेलेकी छैनन् । न त फिल्म खेल्ने चर्चा नै छ । यद्यपी उनी यसै चर्चामा छिन् । अतः त्यसको कारण हो, उनको हट गेटअप ।
खासगरी आफ्नो कामुक हाउभाउ सहितको तस्वीर उनी नियमितजसो पोस्ट गरिरहेकी हुन्छिन् । यस्तै बेलाबखत बलिउड इभेन्टमा पनि उनी देखापर्ने गरेकी छिन् । यस्ता इभेन्टमा पनि उनको पहिरनबारे चर्चा हुनेगर्छ । अलाना लन्डन कलेज अफ फेसनमा अध्ययन गर्दैछिन् । उनको स्टाइल देखेरै उनको फेसन च्वाइसबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । उनको उमेर २२ बर्षको भयो ।
यात्राकी शौखिन: अलाना चंकी पान्डेका भाई चिक्की पान्डेकी छोरी हुन् । चिक्की एक व्यवसायी हुन् । उनी ‘अक्षरा फाउन्डेशन अफ आर्टस् एन्ड लर्निङ’का पनि सह संस्थापक हुन् । यसैगरी अलानाकी आमा डिने पान्डे सेलिब्रेटी हेल्थ एक्सपर्ट हुन् । उनी अभिनेत्री बिपशा बासुकी मिल्ने साथी हुन् ।
अलानाकी आमा एक सेलिब्रेटी हेल्थ एक्सपर्ट हुन् । उनको लभ लाइफको कुरा गर्ने हो भने, उनी यूडी जयसिंहसँग डेट गर्दैछिन् । यूडी चर्चित डिजाइनर मोनिषा जयसिंहका छोरो हुन् । अलानाले यूडीसँगको तस्वीर पोस्ट गरिरहेकी हुन्छिन् । अलानाको फिट बडी देखेर के अनुमान गर्न सकिन्छ भने उनलाई पनि आफ्नी आमाले नै स्वास्थ्य प्रति सजग बनाएकी हुन् । अलाना अक्सर पानीमा पौडिरहेको तस्वीर खिचाउँछिन् ।
हेर्नुहाेस् उनले सामाजिक संजालमा शेयर गरेका केहि तस्विरहरूः